nadiif albaabka & daaqadda qolka Warshad | Shiinaha albaab nadiif ah & dariishadda soosaarayaasha, shirkado
nadiifi albaabka gudiga melamine ee qolalka dawooyinka warshadaha caafimaadka
Iyada oo guryaha jirka iyo kiimikada aad u fiican, caabbinta saameynta, iska caabbinta, aashitada iyo u adkaysiga daxalka alkali, caabbinta UV, iwm;
Melamine saxanka dusha sare ee dusha sare ee aan daaqa lahayn, waxtarka bakteeriyada ee aadka u fiican, ka hortagga wasakhda;
Midab hodan ah iyo maqaarka dusha;
Albaabka albaabku wuxuu qaataa xarigga xiritaanka caagga oo leh waxqabadka xiritaanka wanaagsan;
Waxyaabaha buuxinta dabka u adkaysta sare, iska caabinta dabka sare;
aluminium aluminium loo qaabeeyey muraayad lagu dhejiyo amniga hal albaab oo nadiif ah
Faahfaahinta albaabka albaabka waxaa loo isticmaali karaa keydinta furitaanka ama godadka nidaamka derbiga qolka nadiifka ah.
Nooca albaabka 40, qiimaha iftiinka tayada waa mid aad u fiican.
Albaabka albaabku wuxuu qaataa xarigga xiritaanka caagga oo leh waxqabad wanaagsan.
Daaqad muraayad caadi ah oo lakab keliya ah ayaa loo dooran karaa dariishadda indha indheynta si loo badbaadiyo kharashka.
Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa nidaamka midabka birta birta midabkeedu yahay.
daaqada qolka nadiifka ah ee korontada ku shaqeysa ee leh ceeryaanta
Daaqad daahirinta ayaa leh qaybaha ugu muhiimsan ee ay ka kooban tahay: aluminium aluminium aluminium ah iyo bir bir ah oo aan lahayn iyo hal mar qaab bir ah oo wax taaj oo kale ah; dhinaca geeska: geeska wareega iyo geeska laba jibbaaran. Dhammaan daaqadaha daahirinta waxay la socdaan muraayadaha lakabka laba-laabka ah iyo faaruqinta gudaha, tani waxay siisaa cidhiidhi hawo wanaagsan iyo waxqabadka kuleylka.
holllow laba daaqad dhalaal daaqad nadiif ah
Naqshadeynta qaabdhismeedka qotonsan, daboolka kuleylka iyo kuleylka.
Buuxinta gaaska qallalan, ha soo saarin ceeryaamo.
Xiriir wanaagsan oo nidaamka derbiga ah oo qurux badan.
Waxqabadka xiritaanka wanaagsan.
Si ballaadhan ayaa loogu isticmaalay qalabka elektarooniga, dawada, cuntada iyo warshadaha kale.
Dharka PVC ama aluminium aluminium ah oo si dhakhso leh u duubaya albaabka albaabka
Ilaalinta kuleylka, ka hortagga boodhka, kuleylka dhawaqa iyo waxyaabo kale.
Xawaaraha furan waa la xakameyn karaa.
Ku aqbal waxyaabo aan guban karin oo leh iska caabin wanaagsan oo dabka ah.
Naqshadaynta qaabdhismeedka wanaagsan, waxqabadka xiritaanka wanaagsan.
Naqshadeynta qaabdhismeedka albaabbada kala duwan, la jaanqaado noocyo kala duwan oo rakibo goob ah. Xumayn polyurethane seal, waxqabadka quwad wanaagsan.
wax buuxiya dabka sare, waxqabadka dabka sare.
Daaqadda indha indhayntu waxay qaadataa daaqad madhan oo muraayad ah, taas oo leh saamayn wanaagsan oo dahaadh ah. Xulashada midabada kala duwanaanta midabada albaabka, muuqaalku waa qurux badan yahay.
si ballaaran loogu isticmaalo midabka nidaamka darbiga saxanka birta iyo derbiga madaniga ah.
Shaybaarka dawada caafimaadka dawada ee sheybaarka dawooyinka warshadaha dawada ee GMP nadaafada galvanized birta birta ah ee biraha lagu nadiifiyo
Albaabku wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah oo xoog badan.
Bir daxal laheyn waxay leedahay sifooyin wanaagsan oo dhameystiran iyo caabbinta daxalka sare.
Naqshadeynta qaabdhismeedka albaabbada kala duwan, la jaanqaado noocyo kala duwan oo rakibo goob ah.
Xumayn polyurethane seal, waxqabadka quwad wanaagsan.
Waxyaabaha buuxinta dabka u adkaysta, caabbinta dabka ee sare.
Daaqadda indha indhayntu waxay qaadataa daaqad madhan oo muraayad ah, taas oo leh saamayn wanaagsan oo dahaadh ah.
Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay nidaamka midabka birta saxanka birta iyo derbiga madaniga ah
Windows oo leh indhoole indhoole ah oo gacanta lagu dhisay
Daaqada lagu nadiifiyo waxay leedahay qaybo muhiim ah oo ay ka kooban tahay waxyaabaha: aluminium aluminium aluminium iyo bir daxal
jir bir ah iyo hal mar qaab biraha wax taaj oo kale; qaabka geeska: geeska wareegsan iyo laba jibbaaran
geeska Dhammaan daaqadaha daahirinta waxay la socdaan muraayadaha lakabka laba-laabka ah iyo faaruqinta gudaha, tani waxay siisaa cidhiidhi hawo wanaagsan iyo waxqabadka kuleylka.
sifoon otomaatig ah tayo sare leh oo loo habeeyay albaabka nadiifinta dabka oo leh isdhaxgalka
Kicinta infrared ee qaabka.
Mashiinka waxqabadka sare, nolosha muddada dheer.
si ballaaran loogu isticmaalo mashaariicda nadaafadda ee caafimaadka, cuntada, qurxinta iyo warshadaha wax soo saarka elektarooniga ah.
Ku qalabaysan aaladda dareenka dadka.
Astaamaha: cimri dheer oo adeeg, kordhinta waqtiga xiritaanka inta lagu jiro marinka, fudud hawlgal iyo badbaado, gaar ahaan ku habboon xamuulka, helitaanka gawaarida badanaa, go'doomin deg deg ah qolka nadiifka ah.